Waa maxay sababta ay Spain u joojinayso Fursad Weyn ee Dalxiiska Adduunka?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Waa maxay sababta ay Spain u joojinayso Fursad Weyn ee Dalxiiska Adduunka?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Shirarka • News • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiiska Adduunka wuxuu isu diyaarinayaa mustaqbal weyn iyadoo COVID la xakameynayo.
Tani waa jawaabta dad badan oo ka mid ah socdaalka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska.
Si dalxiiska adduunku mar kale u shaqeeyo waxay qaadataa hoggaamiyeyaal iyo dad leh aragti. Waxa kale oo ay qaadataa dadka raalli ka ah oo awood u leh inay wax qabtaan.
Dalxiiska Adduunku wuxuu u baahan yahay gargaar deg -deg ah UNWTO -na waxay ku guul -darreysatay inay bixiso hoggaan, marmarka qaarkoodna waxay qaadacdaa horumarka ciyaaraha xeeladaha iyo siyaasadda.
Sacuudi Carabiya waxay qaadatay doorka hoggaamiye caalami ah oo ay la socdaan waddamada muhiimka ah ee UNWTO.
Wasaaradda Dalxiiska ee Sacuudi Carabiya casuumay 1000 ka mid ah maskaxda ugu ifka badan ee dalxiiska ku soo socda Maalgashiga Shirka Dadnimada magaalada Riyaad.
Sida laga soo xigtay xubin ka mid ah Shabakadda Dalxiiska Adduunka, Xilliga Weyn ee Dalxiiska Adduunka ayaa ka socda Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Dalxiiska ayaa soo maray caqabado aan macquul aheyn tan iyo bilowgii 2020 sababtuna tahay masiibada COVID-19.
Sacuudi Carabiya, Wasiirka Dalxiiska Mudane Ahmed Al-Khateeb wuxuu muujiyey weji kaliya dalkiisa. Waxa uu ahaa xiddigta rajada ka dhalaneysa ee Kariibiyaanka ilaa Afrika.
Boqortooyadu waxay u qoondeysay balaayiin doollar oo keliya horumarinta awoodeeda dalxiis ee horumarsan laakiin sidoo kale si ay u caawiso adduunka intiisa kale si ay u sii waddo waaxda.
The Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) wuxuu marayaa xiisad hoggaamineed iyadoo Xoghayaheeda Guud uu ciyaarayo ciyaar laba jibaaran.
Sacuudi Carabiya waxay halkaas u joogtay inay ka caawiso diblomaasiyad ahaan iyo lacag ahaanba. Bishii May ee sannadkan, UNWTO waxay xarun goboleed ka furtay Riyadh. Sidoo kale WTTC, Ururka fadhigiisu yahay UK oo matalaya qaar badan oo ka mid ah daneeyayaasha gaarka ah ee ugu waaweyn warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ee caalamiga ah ayaa xarun goboleed ka furtay Riyadh.
Ogaanshaha xaaladda adag ee UNWTO waxay ku jirtay taageero aan ku filnayn oo ka timid Spain dhab ahaan, Sacuudi Carabiya waxay muujisay inay danaynayso inay hay'addan adduunka Madrid ka keento Riyadh.
Tallaabadan oo kale dabcan waxay u baahan doontaa oggolaansho xubnaha UNWTO ee Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda ee Morocco. Khubarada ku dhow arrinta ayaa saadaaliyay in codadka lagama maarmaanka u ah tallaabada noocaas ah ay mar horeba ku dhowaadeen in la sugo, in kasta oo Boqortooyada aysan si rasmi ah u codsan.
Wararka xanta ah ee tallaabadan ayaa Spain iyo qaar ka mid ah xulafada EU -da ka dhigay kuwo ka xiiso badan. Dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ka dambeeyay goobta ayaa si xowli ah ku socday, sida lagu kalsoonaan karo eTurboNews ilaha
Ergay UNWTO ah oo ka socda dal ka tirsan Midowga Yurub oo si weyn ugu tiirsan dalxiiska ayaa u sheegay eTurboNews, isaga/iyada ayaa awood u leh inay u codeeyaan sida uu isagu/iyadu jecel yahay, waxayna u codayn lahayd guuritaan haddii lagu codeeyo.
Ra’isulwasaaraha Spain ayaa wacay Amiirka Sacuudiga ilaa bil ka hor. Waxaa la sheegay in sababta loogu yeeray ay tahay hamiga Riyadh ee ku aaddan suurtogalnimada in xarunta UNWTO ay dhaqaaqdo.
Laba toddobaad ka hor ayaa Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ku lug yeeshay, waxaana mashruucan hakad la geliyay iyadoo ku xiran heshiis la doonayo in wasiirka arrimaha dalxiiska Sucuudigu uu ku dhammeeyo dhiggiisa, Wasiirrada Dalxiiska ee Spain.
Qof aqoon u leh doodan dhexmartay Sacuudiga iyo Spain ayaa u sheegay eTurboNews: “Wadahadallada u dhexeeya Spain iyo Sacuudi Carabiya waa ay socdaan laakiin dhinaca Sucuudiga ayaa ka careysan xawaaraha horumarka. FII dhammaadka Oktoobar waxay u noqon doontaa daqiiqad weyn dalxiiska, iyadoo wasiiro iyo hoggaamiyeyaal ganacsi ay ku sugan yihiin Riyaad. Aynu rajaynno inuu Maroto joogo. ”
Mudane Reyes Maroto waa Wasiirka Dalxiiska ee Spain.
Khabiir si weyn loo yaqaan oo la ixtiraamo oo Yurub u dhow UNWTO, oo aan rabin in la magacaabo ayaa u sheegay eTurboNews:
“Haddii Spain ay u malayso xeeladaha dib -u -dhaca waxay la micno tahay inay ka horjoogsanayaan Sacuudi Carabiya inay sii waddo ololaheeda si UNWTO loogu raro Riyadh, markaa waxay u badan tahay inay khaldan yihiin. Weli waxaa jira wakhti la riixo. Waqtigan xaadirka ah, Maroto waxay joogtaa Talyaaniga, xaflad ganacsi, diiradeeduna ma aha dalxiis. “
Ilo kale ayaa u sheegay eTurboNews"Waxay u muuqataa inay jirto ballanqaad ay Spain ka samaysay qodobbada muhiimka ah ee Sacuudi Carabiya ay ka codsatay inay ka hortagto tallaabadan Xarunta Dhexe in la codsado."
Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale u muuqataa in xawaaraha lagu dhammaystirayo ballanqaadkan ay noqon karto arrinta lagu jahawareerinayo Sucuudiga.
eTurboNews gaaray labada Isbaanish iyo Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga. Faahfaahin dheeri ah lagama helin.